Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » | » Ụgbọ elu ọhụrụ San Jose na Palm Springs
| • Airlines • Airport • Pịa ebe a ma ọ bụrụ na nke a bụ ntọhapụ mgbasa ozi gị!
Ụgbọ elu ụgbọ elu Alaska ọhụrụ si Mineta San José International Airport (SJC) na Palm Springs International Airport (PSP) malitere taa.
Ụgbọ elu ụgbọ elu Alaska kwa ụbọchị na-apụ Mineta San José n'elekere 8:10 nke ụtụtụ, na-erute na Palm Springs tupu elekere 9:30 nke ụtụtụ, kwa ụbọchị. Maka ndị nọ na Palm Springs, ụgbọ elu kwa ụbọchị na-aga San José na-apụ na 10:10 ụtụtụ
"Ọrụ akwụsịghị akwụsị na Palm Springs abụrụla ụzọ a na-achọsi ike ruo ọtụtụ afọ," kwuru John Aitken, SJC Director of Aviation. "Njikọ a dị n'etiti Silicon Valley na Coachella Valley bụ ihe ịrịba ama na-akpali akpali nke mgbake, na mpaghara abụọ ahụ ga-erite uru na ọrụ dị mma, kwa ụbọchị."
"Ichekwa ọrụ na-adịghị akwụsị akwụsị na San José abụrụla ihe kacha mkpa maka ọdụ ụgbọ elu International Palm Springs," kwuru Ulises Aguirre, Onye isi oche nke ụgbọ elu maka Obodo Palm Springs. "San José, yana mpaghara Bay ndị ọzọ, bụ ebe kacha elu maka ndị bi na azụmaahịa na Ndagwurugwu Coachella na anyị nwere ekele Alaska maka ijikọ PSP na SJC."
Ụgbọ elu nke nkeji 80 na-arụ ọrụ n'ime ụgbọ elu Embraer 175, nwere oche 76; 12 na azụmahịa na 64 na akụ na ụba.
Mwepụta nke ọrụ ahụ na-amalite oge ezumike ekele ekele, nke na-amalite taa, na Mineta San José International na-atụ anya ndị njem 400,000 site na izu ụka na-abịa. SJC na-enye ihe ndị a iji nyere ndị njem aka ịkwụsị nchekasị n'ọdụ ụgbọ elu oge ezumike a:
Ndokwa ọdụ ụgbọ ala ọhụrụ dị na flysanjose.com/parking
Mpaghara mbugharị ụmụaka ọhụrụ dị nso n'ọnụ ụzọ ámá 25
Ụlọ oriri na ọṅụṅụ onye ahịa ọhụrụ Vick na Terminal B
Ndị gita na-ebi ndụ na-agagharị na njedebe site na 11/25
Ndị nnọchi anya ọdụ ụgbọ elu na Terminal iji nye ndị njem aka
"Ụlọ ezumike na SJC" ghe oghe
Mmemme Lanyard sunflower (maka ndị njem na nkwarụ zoro ezo)
A na-echetara ndị na-eme njem n'oge ezumike a ka ha na-eyi mkpuchi ihu na ọdụ ụgbọ elu na n'ụgbọelu. SJC na-akwado ịbịarute ma ọ dịkarịa ala awa abụọ tupu oge ụgbọ elu iji nye ohere maka ebe a na-adọba ụgbọala, tiketi, na nyocha, yana ịlele ndị ụgbọ elu maka mgbanwe ụgbọ elu ọ bụla. Ndị njem na-apụ na SJC nwere ike mee atụmatụ n'ihu wee chekwaa ego site na ịdeba ọdụ ụgbọ elu n'ịntanetị. Ka idobe ọdụ ụgbọ elu n'ịntanetị wee hụ ebe a na-adọba ụgbọala ozugbo, gaa na flysanjose.com/parking.
SJC: Na-agbanwe otú Silicon Valley na-eme njem
Ọdụ ụgbọ elu Mineta San José International (SJC) bụ ọdụ ụgbọ elu Silicon Valley, ụlọ ọrụ na-akwado onwe ya nke Obodo San Jose nwere ma na-arụkwa ya. Ọdụ ụgbọ elu, ugbu a dị afọ 71st, jere ozi ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nde mmadụ 15.7 na 2019, yana ọrụ anaghị akwụsị akwụsị n'ofe North America na Europe na Asia. Maka ozi ọdụ ụgbọ elu, gaa na https://www.flysanjose.com.